Wararka - Sharaxaadda Albaabbada
Isugeynta Door Jamb
Qaab bir ah
Nadiifinta Jambs: Looxyada albaabka alwaax dabiici ah oo aan lahayn kalagoys ama guntiinno.
Suufka Khatimidii Geeska qayb yar, oo badanaa ka samaysan maaddo adkaysi leh, ayaa loo isticmaalaa in lagu xidho biyaha ka soo dhaca inta u dhexeysa albaabka albaabkiisa iyo saxafadaha, oo ku dhagan goomaha hoose.
Deadbolt: Furaha loo isticmaalo inuu albaabku xirmo ayaa la xiray, falka ayaa laga soo riixayaa albaabka iyadoo la geysanayo qalabka wax lagu aqbasho ee ku yaal xarkaha ama geedka.
Dhammaadka Khatimidii Khatimidii: Gabal xumbo unug xidhan, oo qiyaastii 1/16-inji qaro weyn leh, oo qaab muuqaal ah u eg, ayaa lagu xidhay inta u dhexeysa sill iyo jamb si loo xiro isku-xidhka.
Jir: Shirarka albaabbada, xubnaha wareegga ee kore iyo dhinacyada, ee albaabku ku xidhan yahay oo ku xidhan yahay. Eeg jamb.
Madaxa, Madaxa Jamb: Shaxda sare ee jiifka ah ee albaabka albaabka.
Jamb: Meel wareeg ah oo wareegga nidaamka albaabka ah.
Kerf: Af dhuuban khafiif ah oo loo gooyay qayb leh caaryada ama caleemaha. Weatherstrip-ka la geliyay kerfs-ka oo loo jaray albaabbada albaabka.
Lxajin: Dhaqdhaqaaq la dhaqaajin karo, badiyaa biin lagu soo raray ama bool, oo qayb ka ah farsamada qufulka, oo wuxuu ku hawlan yahay galka ama galka albaabka albaabka, isagoo albaabka xidhaya.
Prehung: Albaab lagu soo ururiyey loox (jamb) leh sill, weatherstripping iyo birihii oo diyaar u ah in lagu rakibo meel xun.
Shaqo joojin: Qeyb bir ah oo leh god daloolka albaabka, iyo weji qalooca sidaa darteed qaboojiyaha guga lagu rakibo wuu la xiriirayaa markuu xirmayo. Shaqo-joojintu waxay ku habboon yihiin meydadka meertada albaabbada oo isku dheji.
Kabaha: Erey loo adeegsaday qaybta caagga ah xagga hoose ama dhamaadka sare ee astragal, kaas oo xidha dhammaadka iyo qarka albaabka ama qarka.
Boss, Ku marooji Boss: Muuqaal awood u siinaya isku dhejinta furka. Maamulayaasha furku waa astaamaha looxyada wax lagu qoro ee balaastigga ah iyo alwaaxda albaabka aluminiumka laga soo saaray.
Sanduuqa-qaabeeya: Albaab iyo dhinac dhinac ah oo loo qaabeeyey inay yihiin cutubyo gaar ah, oo madax iyo miisas kala go'an. Albaabada qaabaysan ee sanduuqa lagu qaabeeyey waxay kuxiran yihiin sanduuqyada looxyada sidelites.
Sii Sill: Sill loogu talagalay albaabka iyo halbeegga dhinaceeda oo leh ballac buuxa oo ah qaybaha hoose iyo hoose, iyo farriimaha gudaha ee ka soocaya dhinacyada dhinaca albaabka.
Wax taaj oo kale Qayb yar oo alwaax ah oo qaabeysan, oo badanaa lagu sameeyo weji duuban, ayaa loo isticmaalay in lagu jaro laguna dhejiyo guddi jir ah.
Doorlite: Kulan ka kooban jir iyo muraayad quraarad ah, oo markii lagu xiro albaab ka sameysan dalool la sameeyay ama la gooyay, wuxuu abuuraa albaab leh muraayad furitaankiisa.
Qaybta fidinta: Guddi albaab leh oo go'an oo qaabaysan oo leh muraayad suug ah oo cabbirkiisu dhan yahay, oo ku dhegan albaabka laba-geesoodka ah, si looga dhigo qolka albaabka saddex albaab.
Farta Wadajirka ah: Habka loogu biiro qaybaha gaagaaban ee keydka guddiga si wadajir ah, dhammaad ilaa dhammaad si loo sameeyo kayd dheer. Albaabka iyo qaybaha jir waxaa badanaa lagu sameeyaa iyadoo la isticmaalayo keyd geedka farta lagu xiray.
Dayactir: Waxyaabaha laastikada ah ee loo isticmaalay in lagu shaabadeeyo muraayadda jir.
Birihii: Taarikada birta leh biinanka birta ah ee isku xidha albaabka albaabkiisa iyo albaabkiisa si loogu oggolaado albaabku inuu lulmo.
Birihii Sile: Dhererka dhererkiisu taagan yahay ee albaab, dhinaca ama geeska albaabkiisa kaas oo ku dheggan meertadiisa fallaadho.
Firfircoonayn: Ereyga loox albaabku ku xardhan yahay jirkiisa. Qalabka albaabka aan shaqeyneyn lama fariisto mana shaqeyn karo.
Suugaan: Isku soo wada duub dhalo iyo meegaar ku wareegsan, kaas oo lagu soo ururiyey albaabka warshadda.
Qaybta Fiditaanka Badan: Shirarka albaabbada deyrka, albaab albaab oo go'an oo ku yaal xayndaab gooni ah, oo geeska ku xiran qaybta albaabka deyrka si loogu daro muraayad kale oo muraayad ah rakibidda.
Hooyooyin Qataarrada khafiifka ah ee toosan iyo kuwa qotoma, taas oo siinaysa iridda albaab muuqaal badan oo argagax leh. Waxay ka mid noqon karaan looxyada akhriska ah, muraayadda dibedda, ama u dhexeeya muraayadda.
Tareenka: Albaabada dahaaran ee dahaaran, qaybta, oo ka samaysan alwaax ama walxo isku dhafan, oo ku dhex socda golaha, guud ahaan geesaha kore iyo hoose. Albaabada istaaga iyo tareenka, gogo 'jiifka ah geesaha kore iyo hoose, iyo meelaha dhexdhexaadka ah, ee isku xira isla markaana qaabeeya shabaqyada dhexdooda.
Furitaanka Qallafsan: Furid qaab-dhismeed qaab-dhismeed ku leh gidaar kaas oo hela halbeeg ama daaqad.
Raadinta shaashadda: Muuqaal ka mid ah albaabka albaabkiisa ama madaxa jir kaas oo bixiya guri iyo orod rollels, si loogu oggolaado shaashadda inay dhinac uga boodaan albaabka.
Sill: Saldhigga jihada ee albaabka albaabka kaas oo ku shaqeeya albaabka hoostiisa si hawada iyo biyaha looga xiro.
Boodbooday Bolt: Qayb ka mid ah astragal-ka dusha sare ama hoose, kaas oo ku dhajinaya madaxyada meertada iyo xeerarka albaabbada dadban ee xiran.
Transom: Kulan quraaradeed oo qaabaysan oo ka koreeya qaybta albaabka.
Wareegga Gaadiidka: Bir bir ah oo si ku meelgaar ah loogu dhejiyo iskuxirka albaabka albaabka ayaa loo xiray maaraynta iyo rarka, kaas oo ilaaliya albaabka albaabkiisa saxda ah ee jir.
Waqtiga boostada: Dec-03-2020
WAAN SAMEEYNAA QAYBAHA AWOODAHA AWOODAHA LEH.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2019-2021: Dhammaan xuquuqda ayaa la keydiyay.